Koonfurta Suudaan oo dib u bilaabeysa isticmaalka Dekadda Dooraale ee Jabuuti - Halbeeg News
JABUUTI ( HALBEEG)- Dekadda Jabuuti ayaa dib-u-bilaabeysa adeeggii dekadeed ee ay siin jirtay dalka Koonfurta Suudaan kadib heshiiskii nabadeed ee ka dhacay dalkaasi, iyadoo sidoo kalana ay dekadda isticmaali doonaan dalalka Burundi iyo Ruwaanda.
“kar hor intii aanuu qarxin dagaalkii Koonfurta Suudaan, waxaanu u adeegi jirnay dalkaa, balse dagaalku ka markii uu dhacay waxaanu ku qasbanaanay in aan joojinno adeegyadii” ayuu sheegay maareeyaha shirkadda maamusha dekadda Dooraale, Wahib Daahir Aadan “iminka maadaama nabaddii ay dib usoo noqotay waxaanu dib u bilaabi doonnaa adeegyadii dalkaa aan u qaban jirnay”.
Shirkadda DPM oo shaqada bilowday bishii Juun ee sanadkii hore ayaa aad isu ballaarisay muddooyinkii lasoo dhaafay.
“Waddan aad u yar sida Jabuuti inuu dhisto 5 dekad iyo jid tareen oo illaa Itoobiya isku xiraya 10 sano guduhood waxaa la oran karaa waa maalgashi xoog leh oo lagu sameeyay kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Shirkadda DPM waxa ay beddashay jihada guud ahaan suuqa gobolka” ayuu yiri Wahib.
Wahib ayaa intaa ku daray in dekadda Dooraale ay tahay tan ugu shaqada badan gobolka, iyadoo hadda u adeegta Itoobiya, dhawaanna ay filayaan iney bilaabaan isticmaalka dekadda dalalka Ruwaandha iyo Burudi.
Inkastoo Shiinuhu uu deymo ku leeyahay, hadana dowladda Jabuuti waxa ay sanadihii lasoo dhaafay aad u maalgelineysay dekadaha dalkeeda.
Haatan waxa ay Jabuuti leedahay 5 dekadood oo casri ah iyadoo uu dhisme ku socdo laba dekad oo kale.
Mar uu Maareeyuha ka hadlayay saameynta ay yeelan karaan deymaha lagu leeyahay ayuu yiri “Ma jirto dowlad deyn iska kaa siineysa illaa ay ka aragto in aad si muuqato dhaqaale u sameyn karto”.